WARBIXIN+XOG: Puntland & Somaliland oo Dagaal isku diyaarinaya Iyo Cabsi laga muujiyey. – Puntlandtimes
LAASCAANO(P-TIMES)- Warsidaha Puntlandtimes.com wuxuu ogaaday in maamulada Puntland & Somaliland oo labaduba ciidamadoodu mudo ku dhaw sannad isku horfadhiyaan deegaanka Tukaraq ee gobalka Sool, ay isku diyaarinayaan dagaal cusub oo dhexmara labada dhinac todobaadyada nagu soo aadan, xili ay gudahooda kaga furan yihiin xasarado siyaasadeed oo xoog leh.
Xog laga helay mid kamid ah Safaaraddaha daneeya arrimaha Soomaaliya ee gobalka Geeska Africa, soona gaartay warsidaha Puntlandtimes.com waxay daaha ka rogaysaa in labada dhinacba ay si buuxda iskaga war-qabaan, qolo kastana og tahay talaabada dhinaca kale uu maagan yahay.
Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa shalay dib ugu laabtay mandiqada Puntland, isagoo lafilayo in uu kulamo la yeesho saraakiishiisa ciidamada iyo guddiga Difaaca oo ay horey balamo uga dhaxeeyeen, markii uu aadayay magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Xogtu waxay daaha ka qaadaysaa in taliyaasha labada dhinacba aysan ku qanacsaneyn dagaal waqtigan ah, gaar ahaana ay diidan yihiin in siyaasad ay lug ku yeelato dagaalkan, xili ay dhinacyada Puntland iyo Somaliland labaduba arrimo doorasho fooda ku hayaan.
Puntland doorashada baarlamaanka iyo Madaxweyne-nimada ayey ka harsan yihiin mudo dhan 2 bilood, sidaas oo kale Somaliland doorashooyinka baarlamaanka iyo dawladdaha Hoose ayaa laga doonayaa Xukuumadda Muuse Biixi in ay qabato, iyadoo ka war-wareegaysa.
Gudoomiyaha golaha guurtida Somaliland Saleebaan Gaal ayaa sheegay Sabtidii shalay in doorashada baarlamaanka iyo golayaasha deegaanada ay dib ugu dhacday sababo la xariira dagaalka Tukaraq, isagoo sheegay in maamulkooda lagu soo duulay, indhahana wuxuu ka qarsaday xaqiiqada duulaanka gobalka Sool, ee ay xukuumadiisu bilowday.
Wasiir kuxigeenka warfaafinta Somaliland Maxamed Abees iyo xildhibaano katirsan baarlamaanka maamulkaas ayaa dhawaan ku hanjabay in ay dagaal qaadayaan, uuna ka dhamaaday dulqaadkii, ka dib weeraro is xigxigay oo ka dhacay Tukaraq iyo deegaanada ku dhaw dhaw.
Madaxweynaha Puntland ayaa horey ugu hanjabay in dib gacanta maamulkiisa loogu soo celinayo gobalka Sool, gaar ahaana magaalada xudunta u ah isku dhacyada Puntland iyo Somaliland ee Laascaanood, taas oo ay su’aalo badan dul-hoganayaan.
Wasiirka Arrimaha gudaha, Dawladdaha Hoose & Horumarinta Reer miyiga Puntland Cabdullaahi Tima-Cade oo kasoo jeeda deegaan ahaan Laascaanood, ayaa isna labo bilood ka hor dhaar ku maray dagaal dhacaya, waxaana sidaas oo kale wehliyey gudoomiyaha Sool ugu magacaaban Puntland oo isna sheegay dagaal in uu dhacayo.
Hanjabaadaha dhinacyada ka sokow, xogta ay heshay Puntlandtimes.com waxay si cad u sheegaysaa in labada todobaad ee nagu soo aadan ay wax iska bedeli karaan xaaladda Sool, gaar ahaana ay labada dhinacba isku diyaarinayaan dagaal dhaca.
Beesha Caalamka ayaa ka walaacsan dagaal ka dhaca gobalka Sool, waxayna ugu baaqday in ay dhinacyadu u hogaansamaan talaabooyinkii horey loo qaaday, ee kuwajahnaa in nabad iyo dadaal wada hadal lagu dhameeyo xiisaddaha taagan, waxaana garwadeen ka ahaa arrintan IGAD iyo Jamciyada Qaruumaha ka dhaxaysa, iyadoo horey u sheegtay Somaliland iyo beesha caalamkuba in laysku raacay afar qodob oo udub-dhexaad u ahaa nabad ka dhalata gobalkaas.